आज २०७६ साल चैत्र १३ गते बिहिवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत १३ गते बिहिवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, […]
आज २०७६ साल चैत्र १२ गते बुधवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत १२ गते बुधवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, […]
आज २०७६ साल चैत्र ११ गते मंगलबारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत ११ गते मंगलबार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, […]
आज २०७६ साल चैत्र ७ गते शुक्रवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत ७ गते शुक्रवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, […]
आज २०७६ साल चैत्र ६ गते बिहिवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत ६ गते विहीबार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, […]
आजको राशिफल: पढ्नुहोस्, आज तपाईको दिन कस्तो छ ?
काठमाडौं । मेष मेष राशिफल हुनेहरुको आजको दिन एकदमै रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवारजनको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । ज्ञान, वैराग्य र अध्यात्मको भावना जाग्न सक्छ । वृष वृष राशिफल हुनेहरुको आजको दिन अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । बुद्धिको उपयोग गर्नाले जटिल ठानिएको कामसमेत सम्पादन हुन सक्छ । मिथुन […]
हातमा यी ९ रेखाहरु हुने ब्यक्ति हुन्छन् अति धनाढ्य । समुन्द्रशास्त्र अनुसार शारीरिक अंगको बनावट तथा रुपरेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवन सम्वन्धी विभिन्न कुरा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । शरीरका अंगबारे बताउने समुन्द्रशास्त्रमा हत्केलामा रहेका रेखाको महत्वबारे चर्चा गरिएको छ । यो शास्त्र अनुसार हाम्रो जीवनमा आर्थिक अवस्था के हुने भन्ने विषयमा […]
आफ्नो भाग्य नङ हेरेर थाहा पाउनुहोस् । नङले तपाईंको हात र गोडाको सुन्दरता बढाउने मात्र होइन, यसले त तपाईंको स्वास्थ्य स्थिति र भाग्य पनि बताउँछ । प्रकृतिले हाम्रो शरीरका हरेक अंगलाई विशेष विचार गरेर बनाएको छ । हरेक अंगको आफ्नै महत्व छ । कपाल होस् वा नङ हरेक अंगको अर्थ र महत्व छ । तपाइँलाई […]
भाग्यमानी व्यक्तिको हातका औंला हुन्छन् यस्ता । हत्केलामा कुनै रेखाको बिशेष स्थान हुने गर्दछ । जसले हाम्रो जीवनमा अधिक महत्वपूर्ण सुख प्राप्त गर्नको लागि संकेत दिने गर्दछ । कुनै पनि मानिसको भाग्य र भविष्य आफ्नै हातमा लुकेको हुन्छ । हाम्रो औंलाको लम्बाईले पनि हाम्रो भविष्यको बारेमा बताउने गर्छ । यसबाट जो कोहीले आफ्नो स्वभावको बारेमा […]
गालाको रंगबाट थाहा हुन्छ स्त्रीको चरित्र ! ज्योतिशास्त्रको एउटा शाखा समुन्द्र शास्त्रमा शरीरमा भएका चिन्हका आधारमा ब्यक्तिको भविष्यको विश्लेषण गरिन्छ । शरीरमा पाइएका यस्ता निशानाहरु हाम्रो भविष्य र चरित्रका बारे धेरै कुरामा बताउँछन् । के तपाइँलाई थाहा छ कुनै पनि स्त्रीको गालाको रंग हेरेर उसको स्वभाव पनि थाहा पाउन सकिन्छ । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार गालाको […]
यस्तो हुन्छ दाँतको बीचमा खाली ठाउँ हुने मानिसको स्वभाव । ज्योतिशास्त्रको एउटा शाखा समुन्द्र शास्त्रमा शरीरमा भएका चिन्हका आधारमा ब्यक्तिको भविष्यको विश्लेषण गरिन्छ । शरीरमा पाइएका यस्ता निशानाहरु हाम्रो भविष्य र चरित्रका बारे धेरै कुरामा बताउँछन् । यसमा व्यक्तिको अनुहार, शरिरको अलग-अलग अंगको आंकलन गरेर व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र अनि व्यक्तित्वको पत्ता लगाइन्छ । जान्नुहोस ! दाँतको […]
समुन्द्रशास्त्र अनुसार यस्ता औंला हुने स्त्री हुन्छन् धोकेवाज
समुन्द्रशास्त्र अनुसार यस्ता औंला हुने स्त्री हुन्छन् धोकेवाज । समुन्द्रशास्त्र अनुसार शारीरिक अंगको बनावट तथा रुपरेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवन सम्वन्धी विभिन्न कुरा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । समुन्द्र शास्त्रमा स्त्री पुरुषका विभिन्न अंग र अंगका लक्षणका बारेमा विस्तृत ब्याख्या गरिएको छ । समुन्द्र शास्त्रले अंगको लक्षण हेरर मानिसको स्वभाव भन्न सकिने […]
आफ्नो स्वास्थ्य नङ हेरेर थाहा पाउनुस्
आफ्नो स्वास्थ्य नङ हेरेर थाहा पाउनुस् । नङले तपाईंको हात र गोडाको सुन्दरता बढाउने मात्र होइन, यसले त तपाईंको स्वास्थ्य स्थिति पनि बताउँछ । प्रकृतिले हाम्रो शरीरका हरेक अंगलाई विशेष विचार गरेर बनाएको छ । तपाइँलाई थाहा नहुन सक्छ हाम्रा नङको रंग र आकार हेरेर स्वास्थ्य समेत थाहा पाउन सकिन्छ । नङको काम चिलाएको भाग […]
हातको औँलाबाट थाहा हुन्छ तपाईको नेतृत्व क्षमता । हस्तरेखा विज्ञानलाई समुन्द्र शास्त्र पनि भनिन्छ । यस पद्धति अनुसार हातको बनावट, औंलाका आकार प्रकार तथा हातका रेखाको आधारमा मानिसको नेतृत्व क्षमता बारेमा बताउन सकिन्छ । समुन्द्र शास्त्र अनुसार व्यक्तिको हातको चोरी औंला हेरेरै उसमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता कति छ र छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन […]
भाग्य बदलिन्छ स्वस्तिकका यी ७ उपायहरु अपनाएमा । सनातन धर्ममा स्वस्तिकलाई परब्रम्हाको संज्ञा दिइन्छ । यस्तै, पुराणहरुमा धनकी देवी लक्ष्मी तथा बुद्धिका देवता भगवान गणेशको प्रतिकको रुपमा पनि स्वस्तिकलाई मानिन्छ । ‘स्वस्तिक’ शब्द संस्कृतको ‘सु’ अथात् शुभ होस् र ‘अस्ति’ अर्थात् कल्याण मिलेर बनेको हो । ज्योतिषशास्त्रमा स्वस्तिकको केही फरक–फरक प्रयोग पनि बताइएको छ, जसलाई […]
धनी हुने ब्यक्तिका हातका रेखाहरु हुन्छन् यस्ता । हस्तरेखा विज्ञानको सहायताले मानिसको भूत, भविष्य तथा बर्तमान थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तै हस्त रेखाका आधारमा भाग्य निर्माण हुने ज्योतिषशास्त्रको दावी छ । हस्तरेखा विज्ञानले मानिसको सबै कुरा हातका रेखाले निर्धारण गर्ने बताउँछ । यी रेखा हाम्रो जन्मकै क्रममा बन्ने र यिनको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ । […]
यस्तो लाभ मिल्छ बुधबार श्रीकृष्णको अवतार विथालदेवको गर्नाले पूजा
यस्तो लाभ मिल्छ बुधबार श्रीकृष्णको अवतार विथालदेवको गर्नाले पूजा । हिन्दु धर्ममा, हप्ताको हरेक बारलाई देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ । ‘बुध’ ग्रहको लागि समर्पित बार नै बुधबार हो । यस दिन विशेष गरी विथाल-देव (कृष्णको अवतार) को पूजा गरिन्छ । पूजा गर्दा तुलसीको पातले गर्नुपर्दछ। कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार अति नै शुभ मानिन्छ। […]
नयाँ घर सर्न र नयाँ काम शुरु गर्न कुन बार उत्तम मानिन्छ ?
नयाँ घर सर्न र नयाँ काम शुरु गर्न कुन बार उत्तम मानिन्छ ? भनिन्छ सोम खेती बुध घर । यसको सहि अर्थ हो कुनै खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुवात सोमबार गर्नुहोस । तर तपाईं नयाँ घरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ वा नयाँ कामको शुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने बुधबार अति उत्तम दिन हो । ‘बुध‘ ग्रहको लागि […]
धन, बुद्धि र व्यापार वृद्धिका लागि बुधबार यी भगवानको बस्नुपर्छ व्रत । हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार बुधबारको दिन बुध ग्रहप्रति समर्पित गरिन्छ । बुधबारको व्रत बुध ग्रहको कुप्रभावको शान्ति कामनाका लागि एवं धन, बुद्धि, विद्या र व्यापार वृद्धिका लागि पालना गर्ने गरिन्छ । यस दिन विशेष गरी विथाल-देव (कृष्णको अवतार) को पूजा गरिन्छ । कुनै नयाँ […]
जीवनमा सुख समृद्धि प्राप्तिका लागि बुधवार अपनाउनुहोस् यी उपायहरु
जीवनमा सुख समृद्धि प्राप्तिका लागि बुधवार अपनाउनुहोस् यी उपायहरु । हिन्दु धर्म संस्कृतिमा बताईए अनुसार प्रत्येक दिन प्रत्येक भगवानका लागि उतिकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । बुधवार हिन्दु ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार बुधबार बिशेषगरी बुध ग्रहको लागि समर्पित गरिन्छ त्यस्तै आज बिघ्नाकर्ता गणेश भगवानको पनि पुजा आराधना गर्ने गरिन्छ । बुधवार हिन्दु ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार बुधबार […]